I-Marketing Blog Ukuthandwa nokungathandwa | Martech Zone
NgoMgqibelo, Januwari 16, 2010 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Amabhulogi Wokumaketha asesimisweni sami sansuku zonke sokugaya ukudla. Ngilandela ama-blogger wokumaketha ku-Twitter futhi nginezifunzo zebhulogi lokumaketha ze-bazillion kumfundi wami (engingahambisani nazo njalo). Ngangivame ukufunda ibhulogi bese ngiyeka ezinsukwini ezimbalwa ngenxa yokuqukethwe, okunye engikufunde iminyaka.
Angikholwa ukuthi kukhona ibhulogi elilodwa # 1 lokumaketha ku-Intanethi. Ngizothembeka futhi ngikutshele lokho, yize ngizihlonipha kakhulu izincwadi zikaSeth Godin, angiyena umlandeli webhulogi lakhe nakancane. Sengivele ngi-ode ngaphambilini incwadi entsha kaSeth, I-Linchpin: Ingabe Ubalulekile?,… Kepha angivamile ukuvakashela ibhulogi yakhe. USeth uvame ukukhipha ibhomu nsuku zonke okufanele likhulunywe ngalo - kepha ngaphandle kokuphawula, alikho ithuba lokuxoxa.
Ngiyakwazisa ukwehluka okufundwa amabhulogi amaningi wokumaketha. Ukumaketha kuyisihloko esihluke kakhulu kukodwa, kusuka kwimidiya yendabuko, ukusakaza, ukuya ku- uphawu lomuntu siqu kanye nabezindaba abasha. Ukumaketha kufaka phakathi amasu ebhizinisi jikelele, okuthengisa nawokukhangisa.
Ukuthandwa Kwami Blog Blog
Uma une-blog yokumaketha, kufanele nobabili nikwenze lokho enikushumayelayo bese nabelana ngemiphumela.
Uma wazisa abafundi bakho ngezibalo zomkhakha, qiniseka ukuthi ubheka ubufakazi obuphikisana nalokho. Imininingwane ivame ukwethulwa ngobandlululo.
Amabhulogi wokumaketha kufanele ahlinzeke ngamathuluzi nezinyathelo ezidingekayo kubakhangisi ukwenza imikhankaso efanayo.
Amabhulogi wokumaketha kufanele acele imibono nezimpendulo futhi anikeze leyo mibono ukukhanya… aze avumele nalabo abangavumelani nethuba lokuthi bathumele okuthunyelwe.
Ibhulogi Lami Lokumaketha Alithandi
Amabhulogi wokumaketha agcina kuphela, abeke amazwana futhi adlulise imininingwane - angalokothi anikeze izandla kubuchwepheshe okufanele bonke abantu banikeze.
Ama-blogger wokumaketha kufanele avale konke okuthunyelwe abone ukuthi babelana ngohlobo oluthile lwemininingwane ewusizo nge umakethi… Hhayi nje umfundi ojwayelekile.
Amabhulogi wokumaketha akumele akhulume ngomthengisi, kufanele akhulume ngekhasimende, inqubo, amathuluzi, amaqhinga nemiphumela.
Okwe-couse, ngifisa nokuthi kube khona umehluko phakathi kwe-Internet Marketing noma iMulti-Level Marketing (MLM) namabhulogi we-Online Marketing. Yize ngiwahlonipha amanye amasu asetshenziswe ngabathengisi beMulti-Level, inkampani ejwayelekile enomqondisi wezokukhangisa ibingeke ihlangane namathemba abo ngendlela efanayo. Ngifisa ukuthi ama-Marketing Blogs azihlukanise ngokusobala.
Yiziphi izici othola uzibandakanya neBhulogi Lokumaketha? Yiziphi izici ezikwenza ufune ukushiya? Yiziphi izihloko ongathanda ukuthi sizibhale ngaphezulu? Beka amazwana kulokhu okuthunyelwe noma sebenzisa ithebhu Yempendulo ngakwesobunxele.